The 'ego' bụ usoro AI nke jupụtara na autopilot nke mmadụ-avatar bio-robot: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 July 2019	• 13 Comments
isi iyi: regmedia.co.uk
Onye ọ isiokwu banyere ndị na-enweghị mkpụrụ obi (NPCs) nwere ike ghọtararịrị na okwu ahụ bụ "mmụcha" ma ọ bụ "mkpụrụ obi" nwere ike iji tụnyere njikọ ikuku n'etiti interface ụbụrụ na avatar na nmegharị. Ihe avatar na nkoghari bu, di ka a na-acho, a na-achikota ya n'uwa ma ya mere o sitere n'ike mmụọ nsọ. N'isiokwu ahụ, ekwuru m obere oge banyere usoro AI nke na-agba ụbụrụ nke avatar. N'isiokwu a, achọrọ m ịkọwakwu nke a. Aha ahụ na-egosi m ọhụụ m nke a: The 'ego' bụ usoro AI nke jupụtara na autopilot nke mmadụ-avatar bio-robot. Ka m kọwaa na n'okpuru ebe a.
Ọ bụrụ na anyị ewere na ahụ anyị (gụnyere ụbụrụ) bụ avatars na nmegharị, mgbe ahụ, e nwere akara ebe ọ bụ onye ọkpụkpọ mbụ; ihe anyị na-akpọ n'ike mmụọ nsọ. N'okwu a jikọtara m, akọwara m na enwere ọtụtụ avatars na-enweghị isi (NPCs) na-eje ije. Ya mere, ndị ahụ bụ ndị ọhụụ na-adịghị arụ ọrụ n'èzí. N'agbanyeghị nke a, ndị ahụ nwere ike ịnweta ụdị mmetụta ọ bụla, na -emepụta echiche dị elu (ịmụ ihe, ịrụ ọrụ, wdg) na inwe ike ịnụ ụtọ nkà na egwu. N'okwu ahụ, m jikwa ígwè ọrụ si na Netflix sụgharịa 'Real Humans' ma zoo aka na Transcendence. Maka ihe dị mma, ka anyị chee na ọgụgụ isi (AI) ga-eru ọkwa 'ọgụgụ mmadụ' na nso nso. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike inye ụbụrụ n'ụbụrụ ma ọ dịghị onye ga-enwe ike ịhụ ọdịiche na 'ezigbo mmadụ' ọzọ.
Ọ nwere ike ịnọgide na-esiri onye ọ bụla na-agụ ihe ike ịhụ na anyị na-ebi na nmegharị, n'ihi na ihe niile anyị na-emetụ, ịhụ, ísì, ịnụ na uto bụ n'ezie ndụ. Nke ahụ bụ nnukwu nghọtahie. Ọ bụrụ na ịbịgharịa na nnukwu microscope na oche nke ị nọ ọdụ ma ọ bụ na tebụl n'azụ nke ị na-agụ nke a, ị ga-ejedebe na nnukwu oghere efu n'etiti ihe ọ bụla nke mkpụrụ ndụ na amị na-eme ha. Ma ọ bụrụ na ị na-eme nchọpụta physics (nnwale nke abụọ), mgbe ahụ, ọ na - egosi na ọ dị naanị ihe dị ma ọ bụrụ na onye na - ekiri ihe. Nke a bụ ihe ngosi nke iko VR, ebe ụwa na-anọghị gị, ọ bụrụhaala na ị gbanweghị isi gị n'ebe ahụ. Na nkwekọrịta ọkpụkpọ dị iche iche, a ga-ejikọta nyocha ọ bụla maka ọkpụkpọ ọ bụla. Ọ bara uru ịbawanye n'ime nkọwa nkọwa ahụ n'azụ nkwekọrịta ahụ, site na ịga na ihe 'nkedo' ebe a na ebe nrụọrụ weebụ ma mụta ịghọta ihe dị na ya.
N'ịchọrọ na ị na-ahụ nkedo, ya mere, ọ bụghị gị na ụmụ mmadụ (ọ bụ ahụ gị nwere ụbụrụ), ma ị bụ onye na-ahụ ihe n'egwuregwu nke na-egwu ma na-ekere ọkpụkpọ a site n'àgwà mmadụ gị. Ya mere, ọ bụ ọnọdụ m na e nwere otutu ụmụ amaala mmadụ na-ejegharị na ndị na-enweghị ikike ndị dị otú ahụ na ebe onye na-egwu egwu / onye na-egwu egwu. Na nke ọ bụla, Otú ọ dị, ọganihu ụmụ mmadụ nwere ọgụgụ isi. Ihe omuma nke a (AI) bu, dika odi, emeputara n'ime bio-brain of avatar. Usoro mmemme di ugbua na DNA ma bufee site na usoro mmeputara nke avatars (usoro nke imeghari onwe ya, ime ime na omumu) na avatar nke ozo. Mmemme mbụ nke ụbụrụ ahụ bụ site na nnabata ndị nna na site na usoro mmemme site na ihe niile na-emetụta uche nke avatar. Usoro nke mmemme ahụ weerezi ya.
Ụdị ọrụ AVA nke avatar dị nnọọ elu nke na o doro anya na ihe kachasị mma iji gee ntị. Ọ bụ ihe anyị kpọrọ "ego" na nkà mmụta uche. M na-ahọrọ ịkpọ ya usoro AI nke na-achịkwa ndụ anyị-avatar.
Ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ na-agba anyị ume nke ọma ma bụrụ nnukwu ego nke ego AI ma anyị hụkwa ihe ịga nke ọma ndị avatars a dịka ụzọ isi aga elu, anyị na-agbaso usoro mmemme ahụ na AI n'ime biobrain anyị n'ime ọrụ ikpebi iji mezuo ndụ anyị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-eburu n'uche na usoro a nke AI sitere n'aka onye na-emepụta simulation a (ọ bụ ezie na ọgụgụ isi mmadụ AI nwere ike ịmụtakwu ma na-aghọwanye nkọ) mgbe ahụ anyị ga-amụta ịmata ọdịiche dị n'etiti mkpebi onye na-eme ka anyị na ụmụ mmadụ na-adabere n'usoro omume AI ma ọ bụ mkpebi ndị dabeere na njikọ mkpụrụ ndụ na-enweghị isi na 'onye mbụ anyị'.
Ị nwere ike ịrụ ụka na usoro nke AI nke ụbụrụ avatar-bio nwere ike ịdị mma karịa ime mkpebi ndị ziri ezi n'ime nkedo a, mana ị chere na 'onye ọkpụkpọ mbụ ahụ' agaghị enwe amamihe ma ọ bụ agaghị enwe nchịkọta. Ka anyị chee na onye ọkpụkpọ ahụ nwere nchịkọta kacha mma (nwere ike ilekọta ebe niile na-egwu egwu) wee nwee ike ime mkpebi ndị ka mma. Ọ bụghị na ọ ka mma ịgafe usoro nke AI nke ụbụrụ avatar-bio (na usoro nke a na-akpọchi na DNA)? Ọ kaghị mma ka ị gee ntị na njikọ mkpụrụ obi na ịtụkwasị obi na nke ahụ?
Nke a siri ike, n'ihi na usoro AI na-enwe obi ụtọ ijikwa nlekọta ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ndị bi gburugburu gị enweghị njide, ya mere na-ebi ndụ na usoro AI, ị ga-achọ ịmalite ịbanye kpamkpam na usoro nke gị. N'ezie, a na-emepụta gị site na nwata ruo - karịsịa ma ọ bụrụ na ịnwere njikọ mkpụrụ ndụ ikuku ahụ - ịghara ige ntị na njikọ ahụ. A ga-emepụta gị iji gee ntị na usoro mmemme nke ụbụrụ gị AI. Agụmakwụkwọ ụbụrụ AI gị na-azụ site na nwata na ị (gị avatar) na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ taa ahụhụ na usoro ọzụzụ a. Nke ahụ bụ usoro agụmakwụkwọ bụ n'ihi na ọ bụ ya mere anyị ji hụ usoro agụmakwụkwọ a ka ọ na-amalite mgbe ọ na-eto eto.
Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ka ị nwetaghachi njikọ mkpụrụ ndụ gị ikuku na mgbe ahụ ọ dị mkpa na ị na-ekwe ka njikọ mkpụrụ obi ikuku ahụ were njide. Ihe omume AI nke na-agba ndụ gị-avatar na-eme ka ị kwenyere na nkedo a bụ ihe dị mkpa. Malite ịchọta na ị na-egwu egwu ma gee ntị mbụ gị site na njikọ njikọ mkpụrụ ndụ gị!
Elon Musk's ụlọ ọrụ Neuralink si neural lace ga-abịa kpọmkwem si DARPA (dị ka internet na smartphones)
Usoro nkoghari nke umu akwukwo di elu
Tags: ai, Avatar, ego, agba, ọgụgụ isi, omume, nyocha, njikọ mkpụrụ obi
11 July 2019 na 13: 17
Echo ma ọ bụ Jenesis
N'agbanyeghị nke ahụ, enwere mgbanaka a maara nke ọma na e nwere simulator, ma ọ bụ onye okike, onye na-elekọta anyị. N'otu aka ahụ, echiche nke onye ka elu maka ịmepụta eluigwe na ala kpụkọrọ ọnụ yiri echiche nke chi nke na-eke ụwa - dịka ọmụmaatụ, dị ka akọwapụtara na Akwụkwọ Jenesis.
11 July 2019 na 13: 27
N'okwu a, echeghị m na onye wuru ngwusi a "na-elekọta anyị". Hụ isiokwu n'okpuru njikọ ikpeazụ na isiokwu ahụ.
Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ n'echiche ụfọdụ ka a na-eme ka nrụpụta ngwongwu mee ihe n'eziokwu bụ na ndị mmadụ chọrọ ịkụda ọnụ ụzọ iji nụ n'ime ụmụ mmadụ ihe dị na Luciferian AI: n'ime usoro nje virus
11 July 2019 na 13: 29
N'otu oge, owuwe ihe ubi site na iji aka eme ihe bụ ihe dị n'ime eziokwu nke anyị bi ugbu a. A na-ata anyị ahụhụ n'ụzọ ime mmụọ.
11 July 2019 na 14: 27
Azụ mmadụ AI na-arụsi ọrụ ike ugbu a iji wuo ọkpụkpọ ọhụrụ na avatars nwere ike ime otu ihe ahụ dị ka ọganihu mmadụ anyị ugbu a:
Ngalaba nke Nchebe Nchekwa Ihe Nchọpụta Ọganihu Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụkarị Sense, nke na-achọ iji gosipụta ezi uche mmadụ n'ogo nke nwatakịrị 18 ọnwa. Mansinghka bụ otu n'ime ndị nchọpụta bụ isi na oru a.
11 July 2019 na 14: 30
Ụzọ kachasị mma iji mee ka ị chefuo mkpụrụ obi gị bụ ịmepụta simulation n'ime mgbagharị.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka mmadụ ihu ọhụụ kwenyere na ijikọta na ọhụrụ AI na - eme ka ị ghara ịnwụ anwụ, ị nwere ike ịwakpo ụlọnga ahụ, n'ihi na ụdị mbụ nke nsụhọ na - eme onwe ha ka ha dị ọhụrụ AI (n'ime usoro ọrịa virus Luciferian ugbu a)
Lee nkọwa a:
11 July 2019 na 20: 07
Na-enwe ihe dị arọ iji ghọta ọgụgụ isi na mmetụta uche ihe ụmụ nwoke chọrọ n'aka edemede ahụ. Echere m na e nwere ịchọọ ụzọ ị ga - esi bie ndụ mgbe ị nwụsịrị ma ọ bụ nwụọ site na ị na - ebute ihe / ịchọta ihe ntanetị nke ụmụ akwụkwọ ndị a na - eme ugbu a. Ọfọn, ha na-anwa ichota nna ukwu ha ma eleghị anya na-agbanahụ Lucifer / ọnwụ site na ịgbanye ọzọ na matrik / akụkụ. Echere m na nke a dị mkpụmkpụ n'ihi na e kere akụkụ dị iche iche site n'amara nke usoro / usoro / njedebe nke na-eme ka Lucifer / ọnwụ kwere omume.
12 July 2019 na 00: 11
N'ọdịnihu dị nso, ndị robots ga-edozi ndị na-adịghị ahụ ahụhụ site na mkpụrụ obi ọ bụla na mkpụrụ mbụ ha (dịka ọdịdị ndụ ụmụ mmadụ nwere ike ịnwe), nke mere na ndị avatars a mụrụ ọhụrụ bụ ndị nwere njikọ mkpụrụ obi dị ọbụna karịa mụta ige ntị n'ihe omume AI ha na Luciferian Ai (onye na-agba ọsọ a) na-enweta ọbụna akara ka ukwuu:
Oge eruola ka anyị kwụsị usoro nje virus Lucifer.
12 July 2019 na 03: 57
Echere m na nmeghari a bụ oge (nke ìhè). Ihe anyị na-ahụ bụ ihe dị n'oge gara aga, n'ihi ya ị nwere ike ịkọ ọdịnihu n'ụzọ dị mfe. Anyị na-edebe nke a n'ihi na anyị abanyela. Ihe nkiri nke matrik ahụ dị ọkụ n'ọtụtụ ụzọ. N'ikpeazụ, Neo nwere ike ịhapụ matrik ahụ, ma ego ya na ịhụnanya maka nwa agbọghọ ya dọtara ya azụ n'ime egwuregwu ahụ. Nhọrọ siri ike ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ dịka onye dị ugbu a. Gaa, mgbe ahụ anyị nweere onwe anyị ma gbapụta anyị. Ekwesịrị m ịsị na enwere m oge siri ike na nke ahụ. Otu ihe doro anya, Agaghị m amalite mmechi ọkpụkpụ ma wee nwụọ ma ghara ịdị na-emeghachi na ọkwa a ruo mgbe ebighị ebi.
N'ezie, anyị nwere ike ịnọ na nnọpụiche nke mbụ na mbụ maara na ihe ọjọọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Anyị aghaghị idebe nke a iji mee ka ọdịnihu dị ọcha.
12 July 2019 na 09: 29
Ebumnuche nke mbụ matrix bụ iji gosipụta na matrik ahụ bụ akara na-enweghị ngwụcha nakwa na ọ ka mma ịghara iguzogide ya. Nke ahụ gbakwunyere ụdị onye nzọpụta (Neo, otu).
Ihe nkiri nke juputara na eziokwu na ighikota nke mere ka anyi kwenye na a choro onye nzoputa. Ọ dịghị mkpa n'ebe ahụ. Na matriz adịghịkwa emeri emeri. Ọ bụ usoro nje virus na nwoke ahụ nwere ajị agba ọcha (Lucifer, onye na-ewu ụlọ) nwekwara ike ịdọgbu onwe ya.
Otú ọ dị, ihe kachasị mkpa bụ nchọpụta na ị pụghị ibi na nmegharị. Ihe mbụ gị bụ n'èzí ma na-ahụ. Ntughari bụ ihe ikpe. Ntughari bu nkoghari. Ị bụghị ahụ gị avatar.
12 July 2019 na 09: 31
Na nkenke: ihe nkiri ahụ matrik ahụ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-akpali akpali na mgbagwoju anya iji merie usoro nje virus a. A na-achọ ụdị anụ ọhịa (Neo) maka nke ahụ; Jizọs Kraịst ọhụrụ.
Mba, ihe efu. Ozugbo ị chetara onye ị bụ, ị nọ ebe ahụ.
12 July 2019 na 14: 43
Ndị na-eso edemede ahụ na-ebute ihe na-esi na ya pụta, ọ bụrụ na anyị agbaso ihe mgbaru ọsọ nke transhumanism mgbe ahụ, anyị na-aghọ ndị ohu kachasị.
-agbawa, gbarie dere, sị:
15 July 2019 na 04: 58
15 July 2019 na 10: 24
" Ọ bụ Deutsche Bank ka e bu ụzọ zọpụta mbụ?
Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma! »
Nleta nile: 10.763.092
Ọ bụ Deutsche Bank ka e bu ụzọ zọpụta mbụ?
Martin Vrijland op Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma!
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ op Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma!
Riffian op Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma!
guppy op Kedu ka anyị ga - esi mee mgbanwe dị ukwuu ma ọ bụrụ na 99% anaghị adị ndụ?
Martin Vrijland op Kedu ka anyị ga - esi mee mgbanwe dị ukwuu ma ọ bụrụ na 99% anaghị adị ndụ?
Jikọọ ndị 1.609 ndị ọzọ debanyere aha